४० करोडको टोमोथेरापी काठमाडौं भित्रिएको एक वर्षमा पनि वीर अस्पताल पुगेन - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ ४० करोडको टोमोथेरापी काठमाडौं भित्रिएको एक वर्षमा पनि वीर अस्पताल पुगेन
४० करोडको टोमोथेरापी काठमाडौं भित्रिएको एक वर्षमा पनि वीर अस्पताल पुगेन
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ असोज ६ गते, १४:१० मा प्रकाशित
काठमाडौ— वीर अस्पतालका लागि ल्याइएको क्यान्सरको उपचार गर्ने अत्याधुनिक उपकरण टोमोथेरापी प्रयोगबिहीन छ । एक वर्ष अगाडि नेपाल भित्रिए पनि वीर अस्पताल लगिएको छैन् । अस्पतालले लामो संघर्ष गरेर ४० करोड मुल्यमा अमेरिकाबाट उक्त उपकरण किनेको हो ।
वीर अस्पतालमा टोमोथेरापी राख्ने ठाउँ नभएको भन्दै एक वर्ष देखि शशस्त्र प्रहरी कार्यलय बलम्बुमा राखिएको छ । एक वर्षदेखि त्यसको अवस्थाका बारेमा कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
‘करोडौ रुपैयाँ लगाएर किनेको सो उपकरण बीच बाटोमा राखिएको छ त्यसको अवस्था कस्तो छ कसैलाई जानकारी छैन,’ वीर अस्पतालका क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्य भन्छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले भने अझै केही महिना वीरमा नआउने बताए । टोमोथेरापी उपकरण राख्ने स्थानको मर्मत भइरहेकोले अझै केही समय सेवा अवरुद्ध हुने उनले बताए ।
२० वर्ष पुरानो कोबाल्ट मेसिन २०७२ सालमा विग्रिएपछि क्यान्सर रोगको उपचार वीरमा बन्द छ । भारतीय कम्पनीले समयमा कोवाल्ट मेसिन लैजान नमानेपछि नयाँ जडान गर्न ढिला भएको वीर अस्पतालका क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. आचार्य बताउँछन् ।
नेपालको पहिलो उपकरणको बेहाल
हालसम्म नेपालमा यस्तो उपकरण संचालनमा आएको छैन । विश्वमा थोरै मुलुकमा यो उपकरणबाट सेवा सुरु भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक अत्याधुनिक अमेरिकन प्रविधियुक्त टोमोथेरापी मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । उपकरणको अभावमा प्रत्येक वर्ष ७ सय गरिब तथा विपन्न नागरिकले सेवा पाएका छैनन् ।
अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये ७ सय बिरामीलाई प्रति वर्ष रेडियोथेरापी आवश्यक पर्छ । ‘पैसा भएकाहरु निजी वा विदेश जाने गर्छन तर, वीर अस्पतालमा आउने सबै गरिब हुन्छ ’आचार्यले भने । प्रत्येक वर्ष वीरमा १३ सयको संख्यामा क्यान्सरका बिरामीहरु हुने गर्छन । अस्पतालले बताए अनुसार ०७२ यता ४ हजार बिरामी रेडियोथेरापी सेवा पाउनबाट बन्चित छन् ।